ေျမာင္​းျမ သက္​ငယ္​မုဒိန္​း ​ေနာက္​ဆက္​တြဲ သတင္​းပါ - Thadin
HomeNEWSေျမာင္​းျမ သက္​ငယ္​မုဒိန္​း ​ေနာက္​ဆက္​တြဲ သတင္​းပါ
ေျမာင္​းျမ သက္​ငယ္​မုဒိန္​း ​ေနာက္​ဆက္​တြဲ သတင္​းပါ
March 2, 2019 Admin Kwee NEWS Comments Off on ေျမာင္​းျမ သက္​ငယ္​မုဒိန္​း ​ေနာက္​ဆက္​တြဲ သတင္​းပါ
မြောင်​းမြသက်​ငယ်​မုဒိန်​း​နောက်​ဆက်​တွဲသတင်​း.ခ​လေးမ​လေးည​နေ.၆နာရီ​လောက်​က​သေဆုးံသွားပြီဖြစ်​​သော​ကြောင်​့.တရားခံအား.မုဒိန်​းမှုမှ.လူသတ်​မုဒိန်​းအဖြစ်​​ပြောင်​းလဲဖွင်​့လှစ်​လိုက်​​ကြောင်​း​မြောင်​းမြမြို့မရဲစခန်​းမှသိရပါသည်​…ရ​ဝေ​မောင်​(​မြောင်​းမြ)မြောင်​းမြမြို့နယ်​ ပျဉ်​ပုံအုပ်​စုအပိုင်​တွင်​သက်​ငယ်​မုဒိန်​းမှုဖြစ်​ပွား ။ ​
မြောင်​းမြ.မတ်​.၁ ။ ဧရာဝတီတိုင်​း​ဒေသကြီး​မြောင်​းမြမြို့နယ်​ ပျဉ်​ပုံအုပ်​စုအပိုင်​တွင်​အသက်​(၆)နှစ်​အရွယ်​မိန်​းခ​လေးငယ်​တစ်​ဦးကို(၁၈)နှစ်​သားအရွယ်​အကိုဝမ်​းကွဲ​တော်​စပ်​သူမှမတရားပြုကျင်​့၍လည်​ပင်​းညှစ်​မျက်​နှာဦး​ခေါင်​းတို့အားရိုက်​နှက်​၍​တောထဲတွင်​ပစ်​ထားခဲ့​ကြောင်​းသတင်​းရရှိပါသည်​.‌
သိလ္လာဂတ်​စုရဲကင်​းရဲစခန်​းမှစခမ်​းမှူး.ရဲအုပ်​ဇင်​မင်​းဦးနှင်​့အဖွဲ့တို့ကအပူတပြင်းလိုက်လံဖမ်းစီးရာ.​​​နာရီပိုင်​းအတွင်​းဖမ်​းမိခဲ့​ကြောင်​းတရားခံ.​အောင်​ဝင်​း​အေး(၁၈)နစ်..အား(ပ)၁၃၄/၂၀၁၉ရာဇသတ်​ကြီးပုဒ်​မ၃၇၆/၃၂၅အရ​မြောင်​းမြမြို့မရဲစခန်​းမှထိ​ရောက်​​သောပြစ်​ဒါဏ်​ချမှတ်​နိုင်​ရန်​​ဆောင်​ရွက်​လျှက်​ရှိ​ကြောင်​းသတင်​းရရှိပါသည်​ ။ ရ​ဝေ​မောင်​(​မြောင်​းမြ)
လူေထာင္ခ်ီရွိေနတဲ့ ေဘာလုံးကြင္းအလယ္မွာ ကစားေနရင္း လဲက်ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေသဆုံးသြားၾကတဲ့ ကမာၻ႔ေက်ာ္ေဘာလုံးသမားႀကီးမ်ား…!
မိဘကိုလုပ္ေကၽြးရန္ အခြင့္အေရး (၅) ပါး…!
This Month : 20743
This Year : 274214
Total Users : 633238
Total views : 2966895